Dimmer uye kure kure kugadzirisa - MediaLight Bias Lighting
Dimmer uye kure kure kugadzirisa matambudziko
Takanyora rondedzero yematanho akajairika ekugadzirisa matambudziko anogadzirisa zvinhu zvisina basa.
Tine urombo kuti mimwe yemibvunzo inonzwika senge iri pachena, asi matanho akanyorwa nenzira yemhinduro dzinoshanda kwazvo. Mune mamwe mazwi, kusava ne switch yemagetsi yakavhurwa ndiyo chaiyo # 1 nyaya.
Kana rimwe kana nhanho dzematanho aya dzikasagadzirisa dambudziko, tinokurumidza kutsiva imwe yekumira uye kudzikira kwauri.
1) Simba rakashandurwa rakavhurwa here?
Kana hongu, ndokumbira upe mwenje kupfuura masekondi mashoma kuti upindure kekutanga kuvhenekwa. Dzimwe nguva panowana simba kumusoro kunonoka kana mwenje ichiiswa mune chishandiso chitsva.
2) Kana iwe uchimhanyisa simba kubva kuTV / Monitor / komputa, chishandiso chakavhurwa? Midziyo mizhinji haipe simba kana chishandiso chakadzimwa (vamwe vanozviita, uye iri imwe nyaya zvachose). Iyo dimmer haishande kana pasina simba kune USB chiteshi.
3) Iyo dimmer yakasungirirwa here? Iyo "LED inodzora" mune yakamira isingagone bhegi ine kure ndiko kudzima. Inoda kubatanidzwa. (2nd inonyanya kukonzeresa kuti kure kusashanda 😂).
4) Pane mutsara wakajeka wekuona pakati pechidzima? (Wati waona here iyi vhidhiyo ine yekuisa nhungamiro?)
5) Chii chinonzi simba sosi uye wakamboedza here kushandisa yakasanganisira adapter? (Yese unit asi iyo Mk2 Eclipse inosanganisira adapta muUSA). Kana ikasashanda nesimba reTV inoshanda neadapter? Matambudziko mazhinji anokonzerwa kana pasingakwanise simba sosi inoshandiswa. Chiyeuchidzo: Kurumidza kubhadharisa (kazhinji kunoratidzwa neQ nemheni bhaudhi) maadapter anoteedzera simba (kukurumidza kubheja bhatiri) Zvinogona kukonzera kubatika uye zvinogona zvakare kukonzera kure kure kutadza kushanda paunenge wakanamatira.
6) Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti maedza imwe sosi sosi (kunze kwekutarisa, TV, komputa kana adapta iyo iwe yawaishandisa kekutanga).
7) Mushure mekuisa simba uye kubaya muadapter, ndapota mirira 1 miniti wobva wadzvanya bhatani rekuvharisa / kudzima kakapetwa kagumi uchinge wakabatana neadapter. Magetsi anoita sei? Dzimwe nguva, zvinotora kusvika pamasekonzi matatu kuti mwenje ivheneke kekutanga kana uchishandisa iyo yakasanganisira adapta. Izvi zvinonzi "simba kumusoro kunonoka" uye zvinogona kuitika kana uchishandisa yakasanganisira adapteri, kana kana yakabatana neTV yako. Zvinowanzoitika nguva yekutanga iwe kuzvishandisa kana kana usati wazvishandisa kwenguva yakareba.
Kana idzi nyaya dzikasagadzirisa nhamo dzako dzekutonga dziri kure, iyo dimmer inogona kunge yakanyudzwa uye isu tinotumira kutsiva. Taura nesu kuburikidza nehurukuro kana kuburikidza nefomu yekubatana iri pasi apa.
Chero zvazvingaitika, madhimoni akafukidzwa kwemakore mashanu, saka usakanganwa kutibata nesu kana izvi zvikaitika zvakare.
Chekupedzisira, ndokumbira undizivise kodhi yako ID nekero. Ndatenda! Isu tinoteedzera nyaya nedhidhi ID kuti tione kana paine zvimiro zvinogona kutidzidzisa maitiro ekugadzirisa nyaya dzeramangwana uye hatimbofungidzira kuti mumwe munhu haana kutama kubva zvavakaraira.